Ukuphupha ngokungabikho Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Zininzi iimeko apho sonwabela ukuba phakathi kwabantu, sabelane ngeemvakalelo kwaye sitshintshiselane ngezinto esizibonayo. Ukuba abanye abantu abekho, sinokuba lusizi, okanye okungenani sizisole ngokungabikho kwabo. Ngamanye amaxesha, nangona kunjalo, sonwabile yile, umzekelo xa sisiva isidingo sokuba sodwa kwaye kungafuneki ukuba sithethe nabani na, akufuneki sichaze nantoni na komnye umntu.
Ukungabikho komntu omnye okanye nangaphezulu kunokubangela iimvakalelo ezahlukeneyo ephupheni. Oku, kunye nobudlelwane umntu anabo nomntu ongekhoyo, zichaphazela ukutolikwa kwala maphupha. Ke ngoko, kunokuba luncedo ukuthatha amanye amanqaku emva kokuvuka kwaye ke ukutolika amaphupha akho ngokuchanekileyo emva koko.
Ngaba umntu ebengekho emaphupheni akho kwaye uyazibuza ukuba kuthetha ntoni oku? Ungalitolika njani iphupha elinje, unokufumana apha:
1 Uphawu lwephupha «ukungabikho»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Umnxeba ophosiweyo: yintoni ebangela ukuba uphuphe?
2 Uphawu lwephupha «ukungabikho» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ukungabikho» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ukungabikho» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukungabikho»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Umnxeba ophosiweyo: yintoni ebangela ukuba uphuphe?
Ukuba umntu ophuphayo uphawula umnxeba ophosiweyo kwifowuni yakhe okanye kwiselfowuni okanye kwi-smartphone ephupheni, usenokuba uphoswe lithuba elibalulekileyo el mundo yomlindo. Ukongeza, ukungabikho komnxeba kunokuba ngumqondiso wokuba umntu uzama ebomini bokwenyani ukunxibelelana nomntu ophuphayo.
Uphawu lwephupha «ukungabikho» - ukutolikwa ngokubanzi
Nabani na ophupha ngokungabikho komhlobo okanye umntu omthandayo, mhlawumbi nokuba lilungu losapho, phantse uhlala eziva elusizi. Umntu ulahlekile kwaye umntu ekuthethwa ngaye unqwenela ephupheni ukuba omnye abekhona.
Nokuba iimvakalelo zakho azithandeki, ngokoluvo ngokubanzi oku akuthethi ukuba kukho into embi kubomi bokwenyani: kunoko, iphupha libabonisa. Ukusondela umntu olahlekileyo kubomi bakhe bemihla ngemihla. Usondele kakhulu kumntu ochaphazelekayo kwaye uhlala esecaleni kwakhe. Iphupha elo kufuneka likwazise ukuba umxabise kangakanani lo mntu. Kukwasebenza kwaloo nto nokuba umntu akekho ephupheni kuba udlulile. Oku nako akuthembisi ukufa yokwenene okanye ukuphela kobudlelwane obusondeleyo: oku kungakhokelela ku Umtshato ukwazisa.
Kwakhona amaphupha abizwa uphawu oluqinisekileyo ikhulelwe apho umntu ongamthandiyo engekhoyo. Oku kubonisa ukuba lo mntu uza kunyamalala kungekudala ebomini bokwenyani, ukuba ngekhe uphinde umbone, kukonwabisa wena.
Uphawu lwephupha «ukungabikho» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokweli phupha lahlulwe ngokweenkcukacha, zeziphi iimvakalelo ezibangela ukungabikho nokungabikho komntu ephupheni. Ukuba usephupheni kwimeko eqhelekileyo okanye kwindawo enomehluko kuphela umntu olahlekileyo, oku kunokuba ngenxa Ukungangqinelani yalatha ebomini bokwenyani. Oku kuyinyani ubuncinci ukuba umntu akuva ntlungu ngayo, kodwa uyakuqaphela ukungabikho.
Nangona kunjalo, ukuba unengxaki yokungabikho komntu ephupheni, oku kunokuba yinto yokwenyani. ilahleko uphawu ebomini bokwenyani. Kwangelo xesha, nangona kunjalo, inokubonisa ingqalelo kwinto yokuba iphupha ngokwalo lityhala into okanye umntu aphume ebomini bakho, ongakwaziyo okanye ongafuni kwenza ngaphandle kwayo. Kule meko, kuya kufuneka uzithathele ingqalelo izinto ozenzayo kunye nendlela ocinga ngayo xa kuvela ithuba kwaye ungenzi ngokungxama. Kuphela kuxa unokuphepha ukuzisola kamva.
Iintlungu zangaphakathi ezinamandla, eziphantse zibambe, ezibangelwa ephupheni ngokungabikho komntu, nazo, ngokwendlela yokujonga kwengqondo, nangokwezenzo ezingenangqondo kunye nokuzisola okukhulu okulandelayo. ukulumkisa.
Uphawu lwephupha «ukungabikho» - ukutolika kokomoya
Ngokwendlela yokomoya, ukungabikho komntu kunokubonisa isizungu. Iphupha livakala kwelakho ubomi bokomoyag ushiyeke wedwa.